Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတော့မယ့် Toyota ! – MyMedia Myanmar
Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတော့မယ့် Toyota !
အမေရိကရဲ့ မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာရုံးမှာတော့ Celica ဆိုတဲ့ နာမည်တစ်ရပ်ကို ဂျပန်ကုမ္ပဏီ Toyota အနေနဲ့ မူပိုင်ခွင့်တင်လာခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ စာရွက်စာတမ်း သတင်းအချက်အလက် တွေကို တော့ CarBuzz သတင်းကနေ စတင်ထောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီနာမည် တစ်ခုတည်း ကြောင့်တော့ Toyota Celica အသစ်ကို စတင်ထုတ်လုပ်နေပြီလို့တော့ ယူဆလို့ မရသေးပါဘူး။ အဆိုပါ တင်သွင်းမှုကို ပြီးခဲ့ တဲ့ ဇန်နဝါရီ လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး “Automobiles And Structural Parts Thereof” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ မြင်ရတဲ့ အတွက် အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အနေနဲ့လည်း ဖြစ်လာ နိုင်ပါသေးတယ်။ ကားကုမ္ပဏီ အတော်များများကလည်း သူတို့ရဲ့ Trademark Names တစ်ချို့ကို တကယ့်လက်တွေ့မှာ ထုတ်လုပ် အသုံးမပြုကြပဲ တင်သွင်းလေ့လည်း ရှိကြပါသေးတယ်။ အချို့သော ကုမ္ပဏီတွေ အဖို့ ကလည်း သူတို့ရဲ့ အဆိုပါ နာမည်တွေကို လာမယ့် အနာဂါတ်မှာ အသုံးချ ဖို့ အတွက် ကြိုတင်ပြီး မူပိုင်ခွင့် ယူထားလေ့ ရှိတတ်ကြ ပြန်ပါ တယ်။
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ Toyota လို ကုမ္ပဏီအတွက်ကတော့ တော်တော်လေး အရေးပါတာ ဖြစ်တာ ကြောင့် အဆို ပါနာမည်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ မူပိုင်ခွင့်တွေကို ပိုမို အလေးထားတဲ့ သဘောနဲ့ တင်သွင်း တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Toyota အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အဆိုပါ Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကပဲ ပြန်လည်ပြီး အသက်သွင်းခဲ့ ပါသေးတယ်။ အခုလိုမျိုး နာမည် အဟောင်းတွေကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလေ့ရှိတာကတော့ Toyota တစ်ခုတည်းတင် မဟုတ်ပါဘူး။ Ford ကုမ္ပဏီကလည်း မကြာသေး မီကပဲ သူတို့ရဲ့ Thunderbird ဆိုတဲ့ Trademark ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ကြသလို လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် အနည်းငယ် အတွင်းမှာ တင်လည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါ နာမည် နဲ့ ကားအသစ်ကို ထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ နောက် ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက် အစအန တို့ကို တောင် မတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါဘူး။ အဆိုပါ Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး Sport ကားတစ်စီး အဖြစ် မျိုးဆက် ၇ ခု‌အထိကို ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကား မှာ ဆိုရင် Rear-Wheel Drive ၊ All-Wheel Drive နဲ့ Front-Wheel Drive စနစ် စသဖြင့် အစုံအလင် ပွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဆို ပါ ကားရဲ့ ဒုတိယမြောက် မျိုးဆက် ဟာ ဆိုရင် Supra ဆိုပြီး အခွဲတစ်ခု အနေနဲ့ပါ ထွက်ရှိခဲ့သေးတာ ဖြစ်ကာ World Rally Championship ( WRC ) လို ပြိုင်ပွဲ မှာတောင် အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် ကားတစ်စီးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Celica ထုတ်လုပ်မှု တွေကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် အရောက်မှာ ရပ်ဆိုင်း ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဆိုရင်တော့ Toyota ရဲ့ Sport Car Lineup ထဲမှာ Supra နဲ့ 86 တို့ ရှိနေပြီးသား ဖြစ်တာကြောင့် Celica ကို ပြန်လည် ခေါ်ဆောင်လာပါ့မလားဆိုတာ တကယ်ကို မေးခွန်း ထုတ်ချင် စရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။
Road & Truck နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူး တစ်ခုမှာတော့ Supra ရဲ့ Assistant Chief Engineer ဖြစ်သူ Masayuki Kai က Toyota ဟာ Celica ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းချင်နေတယ် လို့လည်း ဖြေကြားထားခဲ့ ဖူးပြန်ပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ အဆိုအရတော့ Celica ကို အသစ်ကို သာ ထုတ်လုပ် ဖြစ်မယ် ဆိုရင် All-Wheel Drive နဲ့ ထွက် ပေါ်လာနိုင်ပြီး Supra နဲ့ 86 တို့ရဲ့ Rear-Wheel Drive တို့က တမင် ကွဲထွက် အောင် စီစဉ် လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို Sport ကား မျိုးတွေမဆို တွဲဖက်ထုတ်လုပ် ဖို့ လိုအပ်လေ့ ရှိတာကိုလည်း သတိပြုသင့်ပါ သေးတယ်။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ယခင်တုန်းက ထုတ်လုပ် ခဲ့တဲ့ Supra နဲ့ Subaru ရဲ့ 86 တို့ အတွက်ကိုလည်း Toyota ဟာ BMW နဲ့ ပူး ပေါင်းခဲ့ရသေး လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Celica ဆိုတဲ့ နာမည်ကို ပြန်လည် ဖော်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားတော့မယ့် Toyota ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-02-01T15:00:45+06:30February 1st, 2021|MYCARS MYANMAR|